အေသင်မြို့၌ရှိနေချိန်တွင် တမန်တော်ပေါလုသည် ယေရှုနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းကောင်းကို ဟောပြောရန် ဈေးသို့နေ့တိုင်းသွားခဲ့သည်။ (တ. ၁၇:၁၇) ဈေးကိုပေါလုရွေးခဲ့ရသည့်အကြောင်းမှာ အေသင်လူတို့သည် ၎င်းတို့၏အချိန်များစွာကို ဈေးတွင်ကုန်ဆုံးစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
နှစ်ပေါင်း ၂,၀၀၀ နီးပါးကြာပြီးသည့်နောက် ယေဟောဝါ၏လူမျိုးသည် ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သတင်းကို ပျံ့နှံ့စေရန် ဈေးကိုအသုံးပြုနေကြဆဲပင်။ အဘယ့်ကြောင့်နည်း။ ထိုတွင်လူများစွာကို တွေ့နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယနေ့အချိန်တွင် လူတို့သည် ဝယ်ခြမ်းခြင်းကို ဈေးရုံကြီးတွင် ပြုလုပ်ကြပေမည်။ မန်နေဂျာ သို့မဟုတ် စတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်၏ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးနောက် သက်သေခံအချို့သည် ကျမ်းစာ,စာပေများကို ပြသရန်အတွက် စားပွဲတစ်ခု သို့မဟုတ် စင်ငယ်တစ်ခုကို အသုံးပြုကြသည်။
ဥပမာ၊ ယူ.အက်စ်.အေ. နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှိ ဈေးရုံကြီးတစ်ခုတွင် “မိသားစုတန်ဖိုးကို မည်သို့ထိန်းသိမ်းထားမည်နည်း” ဟူသည့်အကြောင်း ဆွေးနွေးထားသည့်စာပေများစွာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ခင်းကျင်းပြသထားသည်။ ရလဒ်မှာမည်သို့နည်း။ တစ်ရက်တွင် ဘာသာစကားခြောက်မျိုးဖြင့် စာအုပ်ပေါင်း ၁၅၃ အုပ်ကိုဝေငှခဲ့ရသည်။
စာအုပ်စင်နားသို့ချဉ်းကပ်လာသည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် သက်သေခံတစ်ဦးက ရှင်းပြပေးနေသည်ကို အာရုံစိုက်၍နားထောင်ခဲ့သည်။ ထိုအမျိုးသမီးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာနှင့် မိသားစုတွင် ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အရေးကြီးကြောင်း သဘောတူခဲ့သည်။ သူသည် အောက်ဖော်ပြပါစာအုပ်များကို ရယူခဲ့သည်– ကြီးမြတ်သောဆရာထံမှသင်ယူလော့၊ မိသားစုပျော်ရွှင်မှု၏လျှို့ဝှက်ချက်နှင့် လူငယ်များအမေး—တာသွားသည့်အဖြေ စာအုပ်တို့ဖြစ်သည်။
မွန်းလွဲအစောပိုင်းတွင် အမျိုးသားတစ်ဦးသည် စာအုပ်စင်ကိုဖြတ်ကာ ကပ်လျက်ရှိသောဆိုင်ခန်းသို့ဝင်ခါနီးတွင်ဖြစ်သည်။ ထိုသူသည် လူငယ်များအမေးစာအုပ်ကို စိတ်ဝင်စားစွာကြည့်ခဲ့သည်။ စင်နားတွင်ရပ်နေသည့်ညီအစ်မသည် စာအုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားစွာ ကြည့်နေသောထိုအမျိုးသားကို သတိပြုမိသည်။ “ဒီစာအုပ်တွေထဲကတစ်အုပ်,အုပ်ကို စိတ်ဝင်စားပါသလား” ဟု ထိုသူ့ကို ညီအစ်မကမေးခဲ့သည်။ ထိုသူသည် ခေါင်းညိတ်ကာ လူငယ်များအမေး စာအုပ်ကိုထိုးပြသည်။ ညီအစ်မသည် ထိုသူကိုစာအုပ်ကမ်းပေးခဲ့ရာ ထိုသူမှာ စာအုပ်ကိုယူရန် လက်ကိုဆန့်ထုတ်ပြီးသားဖြစ်နေသည်။ မိမိတွင်ကလေးသုံးဦးရှိကြောင်း ထိုသူပြောသည်။ စကားစမြည်ပြောနေစဉ်အတွင်း ထိုသူသည် မိမိကလေးများနှင့် တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ် ဆွေးနွေးကြောင်း ပြောခဲ့သည်။ ၎င်း၏ကလေးအကြီးနှစ်ယောက်မှာ ဆယ်ကျော်သက်များဖြစ်ကြသည်။ စာအုပ်ကို လှန်လှောကြည့်ပြီးနောက် မိမိ၏မိသားစုဆွေးနွေးခန်းအချို့တွင် လမ်းညွှန်အဖြစ် အခက်အခဲမရှိအသုံးပြုနိုင်ကြောင်း ထိုသူကပြောသည်။ ကြေညာသူသည် မိသားစုပျော်ရွှင်မှု၏လျှို့ဝှက်ချက် စာအုပ်ကိုလည်း သူ့အားပြခဲ့ပြီး သူနှင့်သူ့ဇနီးသည် မိသားစုဆုံးဖြတ်ချက်များချရာတွင် အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် အကြံပြုချက်အချို့ တွေ့မည်ဖြစ်ကြောင်း သူ့အား စိတ်ချစေခဲ့သည်။ အမျိုးသားသည် အကြံပေးချက်အတွက် ကျေးဇူးတင်ခဲ့ပြီး အလှူငွေများပေးခဲ့ကာ သက်သေခံတစ်ဦး သူ့မိသားစုထံလာလည်ပတ်ရန် ကမ်းလှမ်းချက်ကို လက်ခံခဲ့သည်။
သက်သေခံများသည် ဈေးရုံကြီးတွင် သက်သေခံသည့်နေ့နှင့်ပတ်သက်၍ မည်သို့ခံစားခဲ့ရသနည်း။ “ဒီလိုနည်းနဲ့ဟောရတာကို ကျွန်မတော့ပျော်တယ်” ဟုညီအစ်မတစ်ဦးပြောသည်။ “ကျွန်မအတွက်တော့ အရမ်းကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပဲ။” အခြားညီအစ်မတစ်ဦး ဤသို့ပြောသည်– “သတင်းကောင်းကို မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ဟောရမယ်လို့ ယေဟောဝါပြောထားတယ်။ ဒီကနေ့ နယူးဂျာစီပြည်နယ် ပါရာမတ်စ်မြို့မှာဆိုရင် ဒီသတင်းကောင်းဟာ ဘာသာစကားအသီးသီးကလူတွေကို စွဲမှတ်စေခဲ့တယ်။ ဈေးရုံကြီးမှာသက်သေခံရတာ အရမ်းကောင်းတယ်။ ပါဝင်တဲ့သူအားလုံး ပျော်ခဲ့ကြတယ်။ တစ်နေ့တာကုန်သွားတဲ့အခါ ကျွန်မတို့ထဲက ဘယ်သူမှမပြန်ချင်ကြဘူး။”
သတင်းကောင်းကို နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် သင်ဟောပြောနိုင်ပါသလော။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကနည်းလမ်းမှာ တစ်အိမ်မှတစ်အိမ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ (တ. ၂၀:၂၀) သို့သော် သင့်အနေဖြင့် ဈေး သို့မဟုတ် ဈေးရုံကြီးတွင်သက်သေခံရန် စဉ်းစားနိုင်မည်လော။